Poonte 3943 days ago
parbatya 3943 days ago
world_map 3943 days ago
ritthe 3943 days ago
shirish 3943 days ago
rahulvai 3943 days ago
SurNaTal 3942 days ago
Birkhe_Maila 3942 days ago
भउते 3941 days ago
PallaGhareAntare 3939 days ago
mohanB 3939 days ago
SurNaTal 3933 days ago
मेरो कथा मेरो गीत
Visitor is reading मन विग्रिएको दिन
Visitor is looking at Event: KRI - Premier NYC
Visitor is reading तिम्रो माया
Visitor is reading if anybody knows about visas for old peoples
Visitor is reading College offering Online statistics class
Visitor is reading 21st century
Posted on 09-02-07 5:09 PM Reply [Subscribe]
२०५४-३-१९, पुल्चोक होस्टेल। मन नहुनु हो, भइदिन्छ; नसोच्नु हो दिमाग, सोचिदिन्छ; नरुनु हो दील, रोइदिन्छ; नसम्झनु हो याद, सम्झिइन्छ; नदुख्नु हो मुटु, दुखिदिन्छ; नफुट्नुहो भवनाको बाँध, भत्किदिन्छ। नबगे हुन्थ्यो त्यो खोला, त्यो समय, यो जिन्दगी; बगिदिन्छ। अविरल, अनिस्चित यात्रामा। सागर असिमित छ, मन असिमित छ, भवाना असिमित छ, भुगोल बिकराल छ, इतिहासको गहिरो महासागर अटल छ, अडिक छ। भाँडो खाली बन्दैछ। के गर्नु मेरो देशको त्यो चाँद, म तेहाँ छु भने, जहाँ आमाको सुवास छैन, मात्रित्व विलाएको छ। एउटा दिन थियो, एउटा समए थियो, एउटा जिन्दगी थियो। यादहरु ताजै छन: उमँग थियो, जोस थियो, जाँगर थियो; खुशी, सुख, सन्तोश, लगभग पुर्णता थियो। तर जिवन रित्तिदै जानु रहेछ, सिध्धिदै जानु रहेछ। गाग्रोको पानी कसैको प्यास मेटाएर सकिएको हो। तर जिन्दगी अनायासै सुक्दै गएको छ। अहिले सुख्खा छ, मरुभुमी छ, म्रिगत्रिष्णा नमेटिन सक्छ। जन्मनु, बढ्नु, हुर्कनु, जवान अनि बुढो हुनु; पढ्नु, ज्ञान हासिल गर्नु, प्रबुद्ध हुनु; बाँच्नु, मर्नु। क्रमैसँग समए बुढो हुदै जान्छ। सायद समएलाई बुढो बनाएर म आफु त्यहाँ रहन चाहन्थेँ, सँधै, जहाँ उमँग थियो, तरँग थियो, जिवनमा रंग थियो। तर कहाँ सकिनु? करोडौं बर्ष बिते हुन्, अरबौं पुर्खाहरु विलाए हुन्। म कसरी यत्रो ठुलो बिषमता सिर्जन सक्थेँ र? क्रमै सँग मितिहरु थपिदै गए जिवन इतिहासमा। सोचेको थिएँ होला, त्यो दिन, यो दिन, २००५४ - ३ - १९ गते, धेरै टाढा छ। त्यो कहिल्यै आउँदैन। म त्यहाँ पुगें भने त्यो चन्द्रमा भित्र पुग्नु हो। सुर्यको उज्यालो म भित्र जगमगाउने छ। तर सोचाइ, कल्पना, सपना सायद सपनै हो। सपना वालुवाको पुल हो; बनाउन धेरै सजिलो। तर कसैले पनि सहारामा तर्न नसक्ने। मेरो पुल पनि सायद भत्कियो, आज आएर। अनायासै फेरि जिन्दगीको वाटो हरायो। त्यहाँ, कहाँ कहाँ घना जंगलमा, भयानक जनावरहरुको दर्दनाक् आतंकहरुमा। अन्धकार औंसीको रात, सायद दियोमा तेल सकियो। फेरि कसैले भरिदिने हो कि होइन? अरुले भरिदिएको तेल असुध्द पनि हुन सक्छ। अनकन्टारमै बत्ती झ्याप्प हुन सक्छ। तथापी आफैँ तेल भर्न गाह्रो रहेछ। प्रयासरत छु। मात्रै प्रयास् - अनिस्चित्, असमर्थ पनि हुन सक्छु। सोचेको थिएँ, त्यहाँ पुग्नु कुवेत हो, तेलै तेल, बत्तीहरु जतततै वाल्न सकिने। सधै सबैतिर उज्यालै उज्यालो। तर आज तेहाँ पुग्दा, पानीको प्यास पनि विकराल् - नमेटिने। कहाँको उज्यालो होस्। अरुको उज्यालोमा भर् पर्नु विलाउनु हो। उज्यालो पाउन त आफैँमा उज्यालोपना हुनुपर्छ। तर कसरी आफैँमा उज्यालो समेट्ने? खाडल अझै बढ्न थालेछ। ठानेको थिएँ - त्यहाँ प्रसस्तै माटो पाइन्छ। उर्वरा, रसिलो। जिवन हरियो बन्नेछ। रमाइलो बन्नेछ। लहलह जिवन फुल्नेछ। मानिसहरु रमाउनेछन् - ममा। म आफैँ रमाउनेछु - ममा। तर कल्पनाको संसार एउटा लाम्खुट्टेको टोकाइमा गर्ल्याम् गुर्लुम्म भत्किएछ। म आफैँमा भएको उर्वरत्व रित्तिदै गएछ। हरियाली हराउँदै गएछ। आज एक्कासी ब्यूँझदैछु। समएले परको नेटो काट्नै लागिसकेछ। कसरी रोक्ने, कसरी पक्डने? मन कुँडिएर आयो। मुटु चिरिदै आयो। अनि दुई शब्द यी पानाहरुमा पिल्सिए। बस्, २०५४ शालको आषाढ १९ गतेको साँझ बित्यो। Diploma in Engineering को अन्तिम दिन वित्यो। मैले पाइन, सायद गुमाएँ। सुत्नु छ, किनकि उठेर कहिँ पुगिएन, ब्युँझिएर केहि गरिएन। तथापि भोलि विहान ६-७ वजे आँखा खुलिदिन्छन्। खै किन? थाहा छैन। सायद तेसैले, पर्सि विहान एउटा परीक्ष्या छ, परीक्ष्यै परीक्ष्या को स्रिँखलामा अर्को एउटा ईँटा। तर घर पुरा हुन नपाउँदै धस्किने हो, भत्कने हो, खै के हो? भविस्यलाई तेहिं छाडौँ। भविष्यको कल्पनामा वर्तमान् जतिसुकै गुन्जिएपनि, भुतका, इतिहासका कटु कथाहरु सदा ताजै रहनेछन्। मन सधै कुँडिएरै कुँदिनु पर्ने हो। बित्त्दै जाने छ जीन्दगी, जसै तसै। बस्।
Posted on 09-02-07 5:18 PM Reply [Subscribe]
मीठो, अति मीठो।
Posted on 09-02-07 5:35 PM Reply [Subscribe]
धेरै भाबुकता छ लेखाइ मा । त्यो बेला को कुरा गर्दा exam पछि बेलुका भब्य पार्टी हुँदै कुटाकुट पनि हुन्थ्यो हैन ?
Posted on 09-02-07 6:01 PM Reply [Subscribe]
सुन्दर लेखाइ सुन्तले ज्यू!
Posted on 09-02-07 7:01 PM Reply [Subscribe]
राम्रो लाग्यो, अत्यन्त मार्मिक प्रस्फुटन सुन्तले जी !
Posted on 09-03-07 7:46 AM Reply [Subscribe]
A cocktail ofastory andaessay. Good !
Posted on 09-03-07 10:39 AM Reply [Subscribe]
सुन्तले, तिमीलाई म के भनुं फूल भनुं कि जुन भनुं उपमा धेरै म के दिउं भने जस्तै छ, मेरो प्रतिक्रिया। यो लेखलाई म के भनुं, फूल भनुं कि जुन भनुं....................
Posted on 09-04-07 12:33 PM Reply [Subscribe]
यो diary मनपराइदिनु भएकोमा पुन्टे, पर्बत्या, चित्रे, रिठ्ठे, सिरिश्, राहुल् र समस्त अरु पाठक् बन्धुहरुलाई हार्दिक् धन्यबाद्।
Posted on 09-04-07 12:43 PM Reply [Subscribe]
कस्तो मन बिग्रेछ त बरा सुर न ताल जी को!!
Posted on 09-04-07 1:11 PM Reply [Subscribe]
झण्डै छुटेछ त। हाम्रो नि बैशाँ त्यसरी नै बिग्र्याथे मन, बाबै ! दामी छ।
Posted on 09-06-07 6:11 PM Reply [Subscribe]
डायरीका अन्य पाना कता गए सुन्तलेजी? ति पनि खोजेर राखम् लौ।
Posted on 09-06-07 7:17 PM Reply [Subscribe]
Glad I didn't miss this one. Yeah, it feels that we'll always be young when others around are getting older. When we realize we didn't do anything when we were young..its too late. When we used to see our brothers we used to think that this old fellow is of no use and has wasted his time sitting in some shop that his father got him into. But now, it scares me like hell that the younger generation thinks the same about us. Sutnu cha kinaki uthera kahi pugiyena... nice nice nice.....
Posted on 09-13-07 10:40 AM Reply [Subscribe]
Last edited: 13-Sep-07 10:40 AM
Posted on 09-13-07 10:47 AM Reply [Subscribe]
बिर्खे दाइ, भौते दाइ, अन्तरे र मोहन् बि सबैलाई मेरो बिग्रिएको मनलाइ पनि रमाइलो मनिदिनु भयेकोमा हार्दिक् धन्यबाद्।